AI – DigitalTimes.com.mm
81 shares24 views
မျက်မမြင်များ လမ်းလျှောက်နိုင်အောင် ကူညီပေးမယ့် AI ဦးထုပ်
Ko Thuya - Dec 01, 2018
တရုတ်မှ ကောလိပ်ကျောင်းသား ငါးဦးက မျက်မမြင်များ၊ အမြင်အာရုံ မကောင်းသူများ အတွက် သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ် လူနေမှုဘ၀များကို အကူအညီပေးမယ့် စမတ် ဦးထုပ်တစ်လုံးကို တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ ဦးထုပ်ကို Eye See လို့ အမည်ပေးထားပြီး လမ်းမှ အတားအဆီးများကို အာရုံခံနိုင်တဲ့ လေဆာရောင်ခြည်…
1273 shares347 views
Ko Thuya - Nov 10, 2018
တရုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းဌာန ဆင်ဟွာက ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာဖြင့် ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်း ကြေညာသူကို ပြသလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ လူသား ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်ပြီး စာသားများကို အသံထွက် ဖတ်ပြနိုင်ပါတယ်။ တကယ့် လူသား တစ်ယောက်လိုပဲ သူက မျက်နှာ အမူအယာများ၊…
Gadgets, NEWS, Softwares & Application
227 shares70 views
ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာပါတဲ့ မီးပလက်ပေါက်
Ko Thuya - Nov 05, 2018
စမတ်ဖုန်းများမှာ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာများကို ထည့်သွင်းလာကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AI ကို အခြား ထုတ်ကုန်များမှာပါ အသုံးချလာကြပါတယ်။ အခုလည်း ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာပါတဲ့ စမတ် မီးပလက်ပေါက်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စမတ်နေအိမ် ကိရိယာများကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ Currant က ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။…
cameras, FEATURES, HUBS
2844 shares550 views
အကောင်းမွန်ဆုံး ‘Perfect Shot’ တွေကို ပေးစွမ်းမယ့် Vivo V11 ရဲ့ AI Camera စွမ်းဆောင်ရည်များ
Creepy Tyler - Oct 05, 2018
(Zawgyi) Vivo ကနေ အခုနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ထားတဲ့ V11 စမတ်ဖုန်းဟာ Mid-range ဖုန်းဆိုပေမယ့်၊ အမိုက်စားနည်းပညာသစ်တွေကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ ဖုန်းတလုံးဖြစ်ပါတယ်။ Flagship ဖုန်းအများစုမှာတောင် မတွေ့ရသေးတဲ့ In-display Fingerprint Sensor နည်းပညာ ၊ စခရင်အပြည့်အရသာကို ပေးစွမ်းမယ့် ‘Halo’ notch…
146 shares54 views
Google က အိန္ဒိယမှာ AI စနစ်နဲ့ ရေကြီးမှုကို ခန့်မှန်းပေးနေ
Google က ဒေသတွင်း အစိုးရ ဌာနများနဲ့ ပူးပေါင်း၍ Maps နဲ့ Search တို့မှာ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပေးမှုများ ပြုလုပ်နေတာ နှစ်များစွာ ကြာနေပါပြီ။ အခုလည်း ဂူဂယ်လ်က အိန္ဒိယမှာ AI ကို သုံး၍…
205 shares74 views
နှလုံးရောဂါကြောင့် လူသေဆုံးမှုကိုကြိုတင်တွက်ချက်ရာမှာ ဆရာဝန်ကို အနိုင်ယူသွားတဲ့ AI
Ko Thuya - Sep 10, 2018
[Zawgyi] ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာက နှလုံးရောဂါကြောင့် လူ သေဆုံးမှုကိုကြိုတင်တွက်ချက်ရာမှာ ဆရာဝန်ထက် ပိုမို တိကျတယ်ဆိုတာစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ PLOS One Journal မှာ ရေးသားထားတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ Francis Crick Institute မှ သုတေသန ပညာရှင်များဟာ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာကို…
119 shares52 views
Ko Thuya - Jul 29, 2018
Google က ယခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ I/O Developer Conference မှာ လူသားများနဲ့ ဖုန်း ပြောနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကို Google Duplex လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ အခုလည်း အလားတူ နည်းပညာ…
682 shares382 views
[Zawgyi] ချမ်းသာလွန်းတဲ့သူတွေ နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးလက်ထောက်တစ်ယောက် (Secretary တစ်ယောက်) ဆိုတာ သွားလေရာအရိပ်လိုလိုက်၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေဖတ်ပေး၊ ခရီးသွားဖို့စီစဉ်ပေး၊ အလိုက်ဖက်ဆုံးအဝတ်အစားတွေရွေးချယ်ပေးပြီး တစ်နေ့တာလုပ်စရာရှိတဲ့တာဝန်မှန်သမျှကို ပြောပြပေးရတဲ့သူတွေပါ။ (Secretary Kim လိုပေါ့  ) အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဆယ်လီတွေ ချမ်းသာတဲ့သူတွေမဟုတ်တောင် ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်တစ်ယောက်ထားလို့ရနိုင်နေပါပြီ။ သူတို့ကတော့…
481 shares153 views
Ko Thuya - Jul 03, 2018
ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာက တရုတ်မှ ထိပ်တန်းဆရာဝန်များကို ရောဂါရှာဖွေရေး အပိုင်းမှာ အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။ ဆင်ဟွာရဲ့ သတင်းအရ AI ဟာ တရုတ် ထိပ်တန်း ဆရာဝန် ၁၅ ဦးပါတဲ့ အဖွဲ့ကို အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။ AI ရဲ့ အမည်ကို BioMind လို့…
86 shares38 views
Ko Thuya - Apr 17, 2018
EverCam လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လုံခြုံရေး ကင်မရာဟာ ရေစိုခံပြီး HD Video များကို ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်း၊ အိမ်ပြင်မှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို မီးပလက်ပေါက်များနဲ့ သွယ်တန်းစရာ မလိုသလို ၀က်အူများဖြင့် နံရံမှာ တွယ်ဆက်ထားစရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ သူ့မှာ ပါတဲ့…
112 shares75 views
သင် သေမှာကို ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ပေးမယ့် Google ရဲ့ AI
Ko Thuya - Feb 27, 2018
Google ရဲ့ လက်ခွဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ DeepMind က ရောဂါသည်များရဲ့ အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန် လူမျိုး ၇၀၀ ၀၀၀ ရဲ့ ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်းများကို သူ့ရဲ့ AI မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အဒီအတွက်…
624 shares102 views
Qualcomm က Snapdragon Chips အသစ်များအတွက် AI Engine ကို မိတ်ဆက်
Ko Thuya - Feb 22, 2018
Qualcomm က စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်လို မိုဘိုင်းကိရိယာများမှာ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာကို ထည့်သွင်းပေးနိုင်မယ့် Qualcomm Artificial Intelligence Engine ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ပလက်ဖောင်းဟာ Device များမှာ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာကို တစ်ပါထဲ ထည့်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး…
FEATURES, Softwares & Application, TV & Smart Home Device
326 shares124 views
AI နည်းပညာကို နေ့တိုင်းဘယ်လိုထိတွေ့နေရလဲ???
Ko Thuya - Jan 29, 2018
Artificial Intelligence (AI) လို့ ခေါ်တဲ့ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာကို သင် အသုံးပြုဖူးပါသလား ? စာဖတ်သူက နိုးလို့ ပြောမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် AI ကို သင် နေ့စဉ် သုံးနေပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ AI ဟာ…